Ọ bụghị ihe niile miners ga-alanahụ eri Mbelata bitcoin - Blockchain News
Ole ga Bitcoin na-eri nke na Ngwuputa ọzọ na-aghọ uru?
A 70% dobe na price nke bitcoin site n'etiti December fọrọ belatara profitability nke na Ngwuputa. Na taa price larịị, atapụsị a kacha nta nke $ 6,048, naanị ndị kasị ibu miners nwere ike ịnọ sere n'elu. Ma analysis of Bloomberg na-egosi na ọbụna n'etiti ndị isi egwuregwu ọ bụghị ihe niile nwere ike ndụ.
taa, 67% nke na Ngwuputa-ike na-lekwasị na-aka nke anọ ọdọ mmiri: BTC.com, AntPool, SlushPool na BTC.top. Ma Bloomberg nyocha Tim Kulpan ekwu: “Ọ bụrụ na ọ bụghị gị bụ ụlọ ọrụ na-ejisie kasị Ngwuputa nrụnye zụrụ na N'ogbe ahịa, mgbe yikarịrị ị na-adịkwa ego.” December ebilie ụba Ngwuputa ahịa site 40%, nke mere ka ihe ahaghị nhata nke usoro: dị ka Blockchain.info, ọ bụ 51% ike wepụ ngọngọ.
Ka toro ma na mgbagwoju anya nke mgbawa na ego nke ọkụ eletrik. Ọ bụrụ na bitcoin kwụsịrị na a 50-ụbọchị na-akpụ akpụ nkezi nke $ 13,200, mgbe ahụ, na nke ugbu a mgbagwoju na ọnụ ọgụgụ nke hashes, nkezi egwuputa ezi ngwá ga-enweta $ 80 kwa izu (ma ndị okenye ngwá, ala uru). Otú ọ dị, ọbụna ihe ndị kasị elu bitcoin-Ngwuputa nrụnye adịghị echebe megide ihe ize ndụ nke adịkwa ego, mgbe price tụlee sharply, na egwuputa mụ ke netwọk: na miners ahụhụ weere-amalite na a price isi $ 6,800.
Ọ bụrụ na ndị price asọbaghị, mgbe ahụ nkezi egwuputa ga-atụfu $ 3 kwa izu. Mining ọdọ mmiri, dị ka AntPool, nwere ike ịnọgide na-nti n'ókèala, ma ha uru ga- 90% ala karịa na a 50-ụbọchị na-akpụ akpụ nkezi nke $ 13,200.
Tim Kulpan yie naanị, na ya chere, ọnọdụ, na nke na Ngwuputa ga-abụkwara uru: uto nke bitcoin na amanyere bụ iwu nke ntọhapụ nke a akụkụ nke miners si egwuregwu na iji belata mpi. The nyocha bụ n'aka na ndị nile taa sonyere ga-enwe ike iji zere losses: ma onye ga-onwe “Ngwuputa ship” si ya ibu, ma ọ bụ onye ọ bụla ga-mmiri iri.
Ọ bụrụ na ị na-a onwe onye na-achọ egwupụta Bitcoin na ndị ọzọ Cryptocurrency, ọ kacha mma ka na-eme ya site na Cloud Mining, akwụ ego ọkachamara na-enwe uru na nnukwu ụlọ ọrụ na-. Ebe a na-n'elu 3 ụlọ ọrụ maka Cloud Mining: Hashflare, IQMining ma ọ bụ Genesis Mining
bitcoinngọngọ yinyeígwé ojii na NgwuputaegwuputaNgwuputaozi
Previous Post:Nanị anọ kaadị Exchanges irube isi chọrọ nke South Korean regulator
Next Post:New Technologies na-abịa dozie Bitcoin na scalability